Vaovao - Toetran'ny vakana fitaratra taratra
Mampiavaka ny vakana fitaratra taratra
Ny vakana fitaratra misy taratra dia boribory fitaratra mafy misy savaivo kely. Izy ireo dia vita amin'ny vovoka fitaratra misy silicon, sodium ary calcium ary atsoaka amin'ny hafanana ambony. Noho ny fihodinana avo, ny hamafiny, ny fanoherana mahery vaika ary ny taratra taratra, dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fingotra plastika, gorodona tsy mahazaka, fitifirana fitifirana, fanaronana taratra taratra sns.
Bika Aman 'endrika mazava, boribory, malama, tsy misy fahalotoana
SiO2 > 67%
CaO > 8,0%
MgO > 2.5%
Fe2O3 > 0.15
ny hafa 2,00%
hery misintona manokana 2.4-2.6g / cm3
hakitroky betsaka 1.5g / cm3
Mohs mafy 6-7mohs
Boribory > 90%
Fampiharana vakana fitaratra taratra
Ny vakana fitaratra azo itarafana amin'ny làlana dia ampiasaina amin'ny hafanana mahazatra sy ny fiasan'ny mari-pana mahazatra. Atsipy amin'ny loko misy marika izy ireo. Ny iray dia ampiasaina ho fitaovana premixed mba hiantohana ny fandinihana maharitra ny marika ao anatin'ny fiainam-panompoana, ary ny iray kosa zaraina eny ambonin'ny eny mandritra ny fanamarihana ny fanamboarana mba hahazoana vokatra azo taratra.
Torohevitra momba ny fifantenana: ny vakana tsara dia matetika ampiasaina amin'ny lalan-droa amin'ny tsipika taloha, misy vokany miavaka; ny vakana madity dia matetika ampiasaina amin'ny fanamarihana lalana vaovao, misy vokany tsara; vakana mamiratra avo dia mazàna ampiasaina amin'ny fanamarihana Expressway, misy vokany tsara taratra.
Misy fenitra telo arakaraka ny tahan'ny fihodinana: vakana fitaratra mamirapiratra 220 (a, b)
Vakana fitaratra 150 voafantina (a, b)
Vakana fitaratra mahazatra (ara-toekarena)
Misy famaritana roa mifanaraka amin'ny haben'ny vakana bitika bitika: vakana: 20-40 harato (vakana lehibe)
B vakana: 20-50 harato (vakana antonony)